Video_TS in ISO Mac / Win - Sida loo Beddelaan Video_TS in ISO
1. Beddelaan TS in DVD
2. Beddelaan TS Video inay ISO
3. badalo Video_TS in DVD
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Video_TS in ISO Si fudud iyo Fast
Haddii aad haysato ururinta DVDs, waxaa laga yaabaa inaad aad u yaqaanaan files VIDEO_TS. Waxaa caadi ah in aad loogu badalo Video_TS in file ISO image u gurmad ah oo fudud ama wadaagida ka khayrbadan ama la qaybiyo. Nasiib wanaag, la Video_TS xirfadle in ISO Converter - Wondershare DVD Creator , waxa aad sameyn kartaa waxaa abid dhakhso badan oo fudud. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka aad u baahan tahay in ay maraan si loogu badalo Video_TS in ISO.
Barnaamijkan waxa cross-madal. Labada DVD Creator for Windows iyo DVD Creator for Mac waxaa laga heli karaa, uun ka heli version saxda ah sida ay xaaladdaada. Tallaabooyinka loo badalo Video-TS in ISO ee Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah) iyo PC waa isku mid. Hoos waxaan qaadi Screenshot Windows DVD Creator tusaale ahaan. Free download Video-TS in Converter ISO:
Sida loo badalo Video_TS in ISO talaabo talaabo ah
Tallaabada 1. Load Video_TS filimada in Video_TS in ay gubi ISO
Si fudud riix "Import" in lagu daro videos barnaamijka. Videos laga keeno lagu soo bandhigi doonaa oo Midigta in thumbnails. Waxaad jiidi karaan jeedi in la beddelo video xigxiga iyo abaabulo DVD horyaal. Videos waxaa laga daawan karaa oo Midigta iyo Keenista sawirka waxaa lagu taageeray.
Tallaabada 2. Edit videos sida aad jeceshahay iyo astaysto DVD bedeley aad
Waxaad noola, isku shaandheyn, ku dar watermarks, goo videos, iwm si xor ah ku DVD gubi this. Si fudud riix badhanka edit ah video dhinaceeda ama muujiyo video ah oo xaq u riix, markaas dooran "Edit" in la furo suuqa kala video tafatir ah.
Ka dib markii in, waxa kale oo aad dooran kartaa mid ka mid ah DVD template menu oo shakhsiyeeyo by adiga oo isticmaaleya isticmaale badhamada menu jecel, mab, soo jeeda, thumbnails, iwm
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo gubi Video_TS in ISO
Ka dib markii dhammaan goobaha, ku eegaan mashruuca DVD ah oo taga si "Guba" tab, doortaan "Image File Save ISO" oo ku dhacay "Guba" badhanka si ay u bilaabaan si ay u gubaan Video_TS in ISO.
Marka aad is geliso DVD video ah oo wuxuu galay drive CD-ROM, waxaad ka arki kartaa laba fayl ee buugga tusaha xididka - AUDIO_TS iyo VIDEO_TS. Magacyada Kuwani waa gaaban for "il gaadiidka audio" iyo "il gaadiidka video." Folder ayaa VIDEO_TS, oo ay ku jiraan IFO, VOB, BUP files, waxaa ku jira DVD oo dhan video xogta iyo macluumaadka loo maqli karo.
Free download Video-TS in ay gubi ISO: